Pabrik Pajamas | Mpanamboatra piyama ambongadiny, mpamatsy
Namboarina tamin'ny akanjo vita amin'ny akanjo natory vita sinoa vita amin'ny akanjo vita amin'ny akanjo vita amin'ny akanjo lava any Sina
* Manaova torimaso tsara amin'ny akanjo mandry mahazatra
* Safidy fanomezana tsara: azo antoka fa fanomezana mafana ho an'ny vadinao sy ny zanakao ary ny namanao izany.
* Ny sety pajama dia malefaka, maivana, ahazoana aina, mangatsiatsiaka, mando hamandoana, tena mety amin'ny lehilahy manao hatsembohan'ny alina
* Fikolokoloana fitafiana: fanasan-damba na fanasana tanana, fanasana amin'ny rano mangatsiaka, sy loko samy hafa. Maina fotsiny amin'ny hafanana ambany.
PY80024 Pieram-pitiavana mahafatifaty manao satin vita amin'ny lamba landy vita amin'ny lambam-paty camisole ary akanjo fohy miorina
Akanjo sy akanjo fohy an'ny satin pajama tsara tarehy, akanjo fohy amin'ny hoditra ary marefo, mahazo aina ary tsy voafehy mandritra ny torimaso. Ny akanjony dia misy fehin-tsoroka azo ovaina, ary ny tendany V-vozona sy ravina lotus dia manome lamaody an'ity pajama ity.
Tag: / pajama satin mora vidy / piyama satin tsara indrindra / set pajama satin / piyama amidy / piyama satin / piyama satin amidy / set satama vehivavy satin
- V vozona
- Tsy misy tanany
- Fialana sasatra
- lamba satinina
- Malemy, miaina, mahazo aina
PY830005 Piyama vita amin'ny kofehy mahazatra, akanjo baoty vehivavy tsotra, miaraka amina lambam-pandriana, fandroana vita amin'ny voninkazo, akanjo mandry amin'ny vehivavy
Vehivavy akanjo vita amin'ny dantelina vita am-boninkazo amam-boninkazo, akanjo an-trano malefaka amin'ny lohataona. Ny endriny V-vozony dia mahafatifaty sy mety, ny cuffs malalaka dia mangatsiatsiaka sy mifoka rivotra, ary ny fehin-kibo azo ahitsy mifanaraka amin'ny filàna. Vita amin'ny poplin, lamba avo lenta, marevaka amin'ny hoditra ary marefo, mikarakara ny hoditra, avelao ianao hanana torimaso mahafinaritra mandritra ny alina.
- Karazan-damba: Poplin
- Vakana: V-vozona
- Fitaovana: Tsy misy
- Style: Tsotra sy voajanahary
- Hatevina: Manify
- Halavan'ny tanan'akanjo: tanan'akanjo lava
- Karazana lamina: voninkazo
PY830006 sexy set 4 pcs vehivavy voninkazo pirinty miakanjo akanjo lava akanjo lava akanjo akanjo akanjo mandry pajama piyama
Vehivavy voninkazo pirinty kanto vita amin'ny akanjo vita amin'ny lambam-baravarana 4-py vita amin'ny akanjo marevaka, akanjo an-trano mahazatra amin'ny lohataona. Vita amin'ny poplin, lamba avo lenta, marevaka amin'ny hoditra ary marefo, mikarakara akaiky ny hoditra. Ny akanjo mandry feno sy akanjo lava fohy valahana dia somary ahazoana aina anao matory tsara.
- Laharana: tsy misy
- Fomba: tsotra sy voajanahary
- Hatevina: mahia
- Halavan'ny tanany: tanany lava
PY870008 Banana Fiber Ladies Pajamas Set Piyama Long Sleeve Breathable Button Pajamas Soft Piyama Kasual Set
Ny lambam-behivavy dia vita amin'ny fibre vita amin'ny volotsangana sy landihazo. Malemy sy malefaka izy ireo, mandoka hamandoana ary mifoka rivotra, mitondra fikitika marefo amin'ny hoditra, maina haingana, mitazona tsara ary mikarakara ny hoditrao. Tsotra sy kanto ny famolavolana lapel, miaraka amin'ny vozon'akanjo swan voaravaka tanteraka. Ny tadiny sy ny placket dia mipetaka tsara, ary ny pataloha misokatra dia mahazo aina.
- Karazan-damba: fibre landihazo / spandex / volotsangana
- Karazana vozon'akanjo: Lapel
- Volavola vozona: v-vozona
- Halavan'ny pataloha: pataloha
PY830002 Viscose Women Piyama kasualy turn-down Collar akanjo fohy akanjo fohy vita pirinty Summer Pajama Shorts vehivavy mody an-trano
Akanjo lava vita pirinty vita amin'ny tanany fohy vita amin'ny lamba famaohana amin'ny akanjo akanjon'ny vehivavy. Malemy sy malama ny lamba, misy drape tsara, sariaka amin'ny hoditra ary marefo, mifoka rivotra ary mifoka hatsembohana. Manampy loko ny akanjo ny fanontana ravina. akanjo fahavaratra tena ilaina ao an-trano.
- Karazan-damba: landihazo / polyester
- Halavan'ny tanany: tanany fohy
- Halavan'ny pataloha: Shorts
PY870007 Vonona ny handefa Boutique Sweet Girls 2 tapa-akanjo piyama landihazo akanjo lava natory vehivavy
Topy mason-tsivana haingana karazana karazana lamina: vozon'akanjony mafy: V-voahidy karazana famaranana: Halavan-tratra elastika: vanim-potoana lava feno: fahavaratra, lohataona, halavan'ny tanan'ny fararano (cm): 7 andro feno ny filaharany mba hitarihana fotoana: manohana ...
PY870006 2021 Vehivavy mamy lava kalitao manamboatra sombin-tànana 2 Piece Cotton Sleep pajama ho an'ny vehivavy
Topy mason-tsivana haingana karazana karazana lamina: vozon'akanjoko mafy: V-voahidy karazana famaranana: halavan'ny tady: Halava feno: fahavaratra, lohataona, halavan'ny tànana amin'ny fararano (cm): 7 andro feno ny filaharany mba hitarihana: Manohana ...
PY870005 Vehivavy mamy kanto avo lenta miendrika akanjo lava vita amin'ny akanjo mandry Pajama
PY870004 Wholesale Wholesale Women Multicolor Short Satin Short Sleeve Short Button Fampandriana lamba napetraka ho an'ny fahavaratra
Topy maso Karazan-tsipiriany haingana: Karazan'akanjo: Valaho matevina: Karazam-baravarana mihidy: ravina lava vita amin'ny elastika: Shorts Season: Halavan'ny tanany fahavaratra (cm): 7 andro fohy santionany filaharana filaharana: Support S ...
PY870003 2021 Fivarotana mafana ny vehivavy Sexy Lace 2 Piece Set Sleepwear Plus Size Piyama
Topy mason-tsivana haingana karazana lamina: vozon'akanjo mafy orina: hafa fanidiana karazana: lava lava valahana: fohy vanim-potoana: halavan'ny tanany fahavaratra (cm): 7 andro tsy misy tanany ohatra filaharana filaharana: Support Supply ...